Candidates | MCPA Election 2016-2018
MCPA Election 2016-2018
MCF EC Nomination
Favorite Color Nomination
Candidates Sort by Name
AUNG AUNG (FM–12007603)
ရရှိခဲ့သော ဘွဲ့ နှင့် ဒီပလိုမာများ
M.B.A, Computer Science
CEO , Ahtar Oo Co.,Ltd.
မြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျူတာပညာရှင်အသင်းတွင် ၂၀၁၀ ခုနှစ်မှ ယနေ့တိုင်တာဝန်ထမ်းဆောင်လျက် ရှိပါသည်။ ပညာရေးဆိုင်ရာဟောပြောပွဲများနှင့် ITPEC Exam ၊ Developer Conference နှင့် အခြား အသင်း လှုပ်ရှားဆောင်ရွက်မှုများတွင် ပါဝင်ကူညီခဲ့ပါသည်။
For more details: Aung Aung.pdf Aung Kyaw Soe (SP) (PM-9000935)
Oracle Certified Expert for Solaris 10 OS (System,Network,Security)
Juniper Networks Certified Internet specialist (JNCIA-ER) (JNCIS-ER) (JNCIA-EX)
Cisco certified Network Associate (640-801)
COO & DIrector at Myanmar Skypay Co.,ltd
Director at Teleglobal Co.,ltd
For more details: U Aung Kyaw Soe.pdf AUNG SOE MOE (FM-12001445)
IDCS (Credit), B.E (Electronics)
Managing Director & Founder (Assembler Automation)
ဦးအောင်စိုးမိုးသည် ကွန်ပျူတာ တက္ကသိုလ် (ICST) နှင့် ရန်ကုန်နည်းပညာ တက္ကသိုလ် တို့တွင် ပညာဆည်းပူးခဲ့သည်။ MCPA ၏ အသင်းဝင်သက်တမ်း (၁၅)နှစ်၊ အမှုဆောင်သက်တမ်း (၉) နှစ်တာအတွင်း စာမေးပွဲကော်မတီ၊ စံနှုန်းကော်မတီ၊ နည်းပညာကော်မတီစသော လုပ်ငန်းကော်မတီများတွင် အတွင်းရေးမှူး၊ ဥက္ကဋ္ဌစသောတာဝန်များ ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။ အသင်းချုပ် (MCF) ပြိုင်ပွဲကျင်းပရေးကော်မတီ၏ အတွင်းရေးမှူး၊ ICT-TVET ကော်မတီ၏ ဥက္ကဋ္ဌ စသော တာဝန်များ ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။ ယခုအခါတွင် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ကွန်ပျူတာပညာရှင်အသင်း၏ အတွင်းရေးမှူးအဖြစ် ဆောင်ရွက်လျှက်ရှိသည်။
၄င်းတွင် MCPA R&D Centre အား ထူထောင်၍ အသင်းဝင်များ၏ တီထွင်စမ်းသစ်မှုများအား ပံ့ပိုးပေးနိုင်ရေးနှင့်၊ အသင်းဝင်များယခုထက်ပိုမို ပူးပေါင်းပါဝင်သော အသိုက်အဝန်းတစ်ခုဖြစ်လာစေရေးတို့အတွက် အားကြိုးမာန်တက်ဆောင်ရွက်လိုသော ဆန္ဒရှိနေပါသည်။
For more details: Aung Soe Moe.pdf AUNG WIN (PM-12007254)
M.Res (Physics) (MU)
Diploma in Building Technology (MTU)
Certificate in System Analysis (NUS)
Diploma in Tourism Management & Studies ( MU)
Diploma in Business Law (MU)
Director, Information System [ Shwe Wun Yan Co.Ltd., ]
Part Time Lecturer in Management Information System [Mandalar Collage]
For more details: U AUNG WIN.pdf AUNG ZAW MYINT (FM–12001610)
အမှတ်(၂) အခြေခံပညာအထက်တန်းကျောင်း ဗိုလ်တထောင်မှ တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းအောင်မြင်ခဲ့ပြီး အစိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ (GTI) မှ EC အထူးပြုဒီပလိုမာရရှိခဲ့သည်။ ရန်ကုန်အရှေ့ပိုင်းတက္ကသိုလ်မှ B.A (English) ဖြင့် ဘွဲ့ရခဲ့ပြီး မြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျူတာပညာရှင်အသင်းတွင် ၂ဝဝ၃ ခုနှစ်မှစ၍ Volunteer အဖြစ်လည်းကောင်း၊ ၂ဝဝ၅ ခုနှစ်မှစ၍ အလုပ်အမှုဆောင်အဖြစ်လည်းကောင်း တာဝန်ထမ်းဆောင် ခဲ့ပါသည်။
၁၉၉၈ခုနှစ်တွင် KMD Computer Centre ၌အခြေခံသင်တန်းများတက်ရောက်ခဲ့ပြီး ၂ဝဝဝ ခုနှစ်တွင် Tutor အဖြစ်အလုပ်ဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်ခဲပြီး ၂ဝဝ၅ခုနှစ် အထိ KMD တွင် Training Manager ရာထူးဖြင့် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပါသည်။
For more details: Aung Zaw Myint.pdf AYE AYE THINN (FM-12000224)
၂၀၀၇ ခုနှစ်၊ ကွန်ပျူတာပညာရှင်အသင်းသို့ စတင်ဝင်ရောက်သည့်အချိန်မှစ၍ ITPEC Exam ၊ MCPA Exam (Software Engineer နှင့် Network) Exam များ ကျင်းပနိုင်ရန် ပါဝင်ကူညီဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ စာမေးပွဲမေးခွန်းများထုတ်ခြင်း၊ စာမေးပွဲစစ်ဆေးခြင်း စသည်တို့နှင့် သက်ဆိုင်သည့်လုပ်ငန်းများ၊ MCPA Developer Conference ကျင်းပခြင်း၊ MCPA (Quize) ပြိုင်ပွဲများ၊ MCPA Day ဟောပြောပွဲများ၊ လုပ်ငန်း များစတင်ကျင်းပနိုင်ရန် စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းနှင့် ထိုပွဲများ ယခုနှစ်အထိ နှစ်စဉ်အောင်မြင်စွာကျင်းပ နိုင်ရန် ပါဝင်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။
For more details: Aye Aye Thinn.pdf AYE KYAW HLAING (FM-12000289)
Aye Kyaw Hlaing is the founder and CEO of Vision to Motion Myanmar Co., Ltd. (V2M),aICT System Integration company founded in 2012. V2M serve enterprise customers and Education on connectivity, computing, storage and security solutions. The company is providing customized solution that deliver strategic advantage, synchronize business process, leverage competitive edge and enhance performance. V2M objective is to beaprovider of End to End Services for enterprise on ICT needs.
For more details: Aye Kyaw Hlaing.pdf BO BO LWIN (FM–12000677)
B.Econ, IADCS, IDCS
Director, KMD Co.,Ltd.
၂၀၀၆ ခုနှစ်မှ စတင်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျူတာပညာရှင်အသင်းတွင် အလုပ်အမှုဆောင်အဖြစ် စတင်ဝင်ရောက်ခဲ့ပါသည်။ ၂၀၀၈ ခုနှစ်မှ ယခုလက်ရှိအချိန်အထိ မြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျူတာပညာရှင်အသင်း ၏ ဘဏ္ဍာရေးမှူးတာဝန်် ထမ်းဆောင်ခဲ့၍ ဘဏ်စာရင်းများ ထိန်းသိမ်းခြင်း၊ ဘဏ်ငွေအသွင်းအထုတ်များ စိစစ်ပေးခြင်း ၊ ပြပွဲများ စပွန်ဆာများမှ ရရှိသည့် ငွေများလက်ခံခြင်း နှင့် ထိန်းသိမ်းခြင်း ၊ ညီနောင် အသင်းများနှင့် အသင်းချုပ်သို့ ပေးရန် နှင့် ရရန် စာရင်းများကို တွက်ချက်ပေးချေခြင်း၊ လစဥ် လစာ​ငွေများ နှင့် ရုံးသုံးစရိတ်များ ထုတ်ပေးခြင်း၊ အသေးသုံးငွေများအား အလွယ်တကူ သုံးစွဲနိုင်ရန် လက်ဝယ်တွင်ထားရှိ ခြင်းတို့ လုပ်ဆောင်ခဲ့ပါသည်။
For more details: Bo Bo Lwin.pdf Dr. MYO MYO NAING (PM-12000397)
B.C.Sc., University of Computer Studies, Yangon, Myanmar (1994),
M.C.Sc.(Credit),University of Computer Studies, Yangon, Myanmar (1997),
Ph.D. (Computer Engineering) Nanyang Technological University, Singapore (2005)
Analyst Programmer (1994-1996) ACE Data Systems Co., Ltd
Demonstrator (1996-1998) Software Technology Department,
Assistant Lecturer (1998-2000) Software Technology Department,
Lecturer (2000-2005) Software Technology Department,
Associate Professor (2005-2006) Software Technology Department, University of Computer Studies,
Executive Director (2006- Up to Now), STI Myanmar University (Formerly known as STI Education)
Director (2004- Up to Now), Nice Fare Travel Co., Ltd.
For more details: Dr. Myo Myo Naing.pdf DR. NWE NWE WIN (FM-12000443)
MSc(Computer Science), University of Durham, UK
PhD(Computer Science), University of Yangon, Myanmar
Work Experiences (1) Professor and Head, Department of Computer Science, University of Yangon
(2) Member of the Board of Study for Computer Science, University of Yangon
(3) Member of the PhD Steering Committee for Computer Science, University of Yangon
(4) Advisor, Education Planning and Improvement Committee (EPIC)
(5) National Consultant, Comprehensive Education Sector Review (CESR)
(6) National Consultant, National Education Sector Plan (NESP)
(7) Dean/Consultant, School of Computing, MCC.i
(8) Vice President of the Myanmar Computer Federation
(9) Chairman of the ICT Utilization and Promotion Committee
(10) Member of Technology for Education Innovation Committee
For more details: Nwe Nwe Win.pdf DR. TUN THURA THET (FM-12000772)
PhD, MSc, M.B.A, B.Com
CEO/ Founder (MIT Pte.Ltd.)
မြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျူတာပညာရှင်အသင်းတွင် ၂၀၀၀ ခုနှစ်မှ စတင်ပြီး အလုပ်အမှုဆောင်အဖြစ် စတင်ဝင်ရောက်ခဲ့ပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျူတာအသင်းချုပ်တွင် ၂၀၁၁ ခုနှစ်မှ ယခုအထိ တွဲဖက် အတွင်းရေးမှူး(၁) တာဝန်အဖြစ် အသင်းလှုပ်ရှားဆောင်ရွက်ချက်များကို လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါ သည်။ ထို့အပြင် SIDC ကော်မတီ၏ ဥက္ကဌ တာဝန်ကိုလည်း တာဝန်ယူဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။
For more details: Tun Thura Thet.pdf DR. ZIN MAUNG MAUNG (12000539)
EI MON KHINE (AM-12003020)
B.C.Sc (Hons), M.C.Sc
Owner – “Treasure Net” IT and Mobile Sale & Services
၂၀၁၅ ဇန်န၀ါရီလမှ စတင်၍ ကရင်ပြည်နယ် ကွန်ပျူတာ ပညာရှင်အသင်း၏ အတွင်းရေးမှူးအဖြစ် စတင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ ကရင်ပြည်နယ်အတွင်း ကျင်းပပြုလုပ်သော ICT ဆိုင်ရာ ဟောပြောပွဲများတွင် ပါ၀င်ဟောပြောပေးခြင်း၊ICT နည်းပညာသင်တန်းများတွင် ၀င်ရောက်သင်ကြား ပေးခြင်း စသည့် ကရင်ပြည်နယ် ကွန်ပျူတာပညာရှင်အသင်း၏ လုပ်ငန်းစဉ်တိုင်းတွင် ပူးပေါင်းပါဝင် ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။
For more details: DAW EI MON KHINE.pdf HLA KAUNG (FM-9000771)
သိပ္ပံဘွဲ့ (ဓါတုဗေဒ အထူးပြု) ကို ၁၉၇၄/၇၅ ခုနှစ်တွင် ရရှိခဲ့ပါသည်။ ၁၉၇၃ ခုနှစ်တွင် ယခု မန္တလေးမြန်းမာ့စီးပွားရေးဘဏ် (၁)၊ ယခင်ပြည်ထောင်စု မြန်မာနိုင်ငံတော် ဘဏ် (၁)၊ မန္တလေးတွင် ဝင်ရောက်အမှုထမ်းခဲ့ပါသည်။ ၁၉၇၆ ခုနှစ်တွင် အထက်တန်းရှေ့နေ စာမေးပွဲကို ဖြေဆိုအောင်မြင်ခဲ့ပါသည်။ ၁၉၇၃ မှ ၁၉၈၅ ခုနှစ်အထိ ကိုယ်ပိုင်အလွတ် ပညာသင်ကျောင်း (ကျူရှင်)ကို ထူထောင်လုပ်ကိုင်ခဲ့ပါသည်။
ICT EXPO 2004 Bangkok Thailand 4-8 Aug 2014, ICT EXPO 2005 Bangkok Thailand 3-7 Aug 2015, INDIASOFT 2013 Kolkata,westBengol,India 21-22 March 2013, HRD programme for Exchange of ICT Researchers and Engineers 2014 Tokyo,Japan 4-11 April 2015, HRD programme for Exchange of ICT Researchers and Engineers 2014 Bangkok Thailand 2015 (29-6-2015)-(5-7-2015), HRD programme for Exchange of ICT Researchers and Engineers 2014 Jakata Indoneasia 2015 (24-8-2015)-(31-8-2015)
For more details: U HLA KAUNG.pdf HLA KYAW (AM-12002314)
Standard & Quality Manager - KMD Group of Companies
Project examiner for 2nd year L4DC, NCC at KMD Institute
Project supervisor for final year degree BIT Project dissertations at KMD Institute
EC Member – Yangon Region Computer Professionals Association (2012 – 1016)
Working Group member – Developer Conferences organized by MCPA
Partly participated in Yangon Region MCPA (from 2012 - 2016) as one of EC members for some preparation of documentations, draft ideas.
Partly participated in Developer Conferences organized by MCPA as one of Working Group members.
For more details: Hla Kyaw.pdf Pages1
Copyright © 2017, MCPA Election 2016-2018 Developed by MCPA. Theme design by FreeBiezz.